Taiwan maxay ka tidhi warbixin sheegaysa inay somaliland aqoonsanayso | Dhaymoole News
Taiwan maxay ka tidhi warbixin sheegaysa inay somaliland aqoonsanayso
August 5, 2020 - Written by wariye999
Hargeysa(dhaymoole news)-Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan, Joanne Ou ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho warbixin ay Somaliland ku sheegtay in ay u diyaar garoobeyso sidii ay u aqoonsan lahaayeen Jesiiradda Taiwan.
Joanne Ou oo la hadleysay warbaahinta ayaa shaacisay in ayna ka hadli karin warbixintaasi oo lagu daabacay Somaliland Chronicle.
Warbixinta ay daabacday warbaahinta Somaliland Chronicle ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu faray dowladiisa in ay baadhaan qaababka loo xoojin karo xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan, oo ay ka mid yihiin “suurtagalnimada in la aqoonsado xidhiidhka ka dhexeeya Taiwan iyo Somaliland.
Warbaahinta Somaliland Chronicle isagoo soo xiganaya ilo xog ogaal ah ayuu sheegay in xaalada qarsoon ee madaxweyne Biixi, amar ku bixiyay in falanqayn lagu sameeyo Sharciga TAIPEI, kaas oo lagu saxeexay sharciga Maraykanka bishii March, iyo inuu u soo bandhigo ikhtiyaarro iyo qiimeyn “faa iidada iyo qummanaanta midnimo Aqoonsiga Taiwan. ”
Wuxuu intaasi ku daray in arinta xiisaha gaarka ah u leh Madaxweyne Biixi uu yahay Qaybta 3aad, Qodobka 2aad ee sharciga, kaas oo dhigaya in dowladda Mareykanka ay tahay inay tixgeliso “kordhinta dhaqaalaheeda, nabadgelyadeeda, iyo xidhiidhkeeda diblomaasiyadeed ee ay la yeelaneyso waddammada sida muuqata u xoojiyay, kor u qaaday, ama kor u qaaday xidhiidhkooda Taiwan. ”
Sidoo kale, Xukuumadda Biixi ayay warbaahintu sheegtay in laga yaabo inay si gaar ah u dhiirrigeliso ka dib markii Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad (NSC) 10-kii July soo dhigay bartiisa twitter-ka isagoo ku amaanaya Taiwan inay kordhineyso ka-qeybgalkeeda bariga Afrika isla markaana ay ku dartay xidhiidh laxidhiidha Maqaalka Mareykanka & Maqaalka Caalamka oo ku dhawaaqaya aasaasida xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland.
Afhayeenada wasaarada arrimaha dibada Taiwan ayaase xustay in Madaxweyne Muuse Biixi uu talo ku bixiyey in laga shaqeeyo sida ugu suurto-galsan ee ay aqoonsi isku dhaafsan karaan Somaliland iyo Taiwan.
Sidoo kale, waxa ay intaasi ku dartay in Somaliland iyo Taiwan uu haatan ka dhexeeyo xidhiidh aad u wanaagsan, islamarkaana ay sii wadi doonaan xoojinta xidhiidhka labada dhinac.